Date My Pet » 4 Matanho kutumira Akakwana First Message kuti Woman
Last updated: Sep. 16 2020 | 4 Maminitsi verenga
Unoda kuwana mukadzi hope dzako kuburikidza paIndaneti kufambidzana? Hukuru, zvose unofanira kuita akamisa Profile pane mumwe zhinji dzakakurumbira paIndaneti kufambidzana nzvimbo uye kutarira kuburikidza Profiles pakati vakanyorwa vakadzi.
Rega chete vane Kutarira dzavo mifananidzo. Zviri zvakanaka kutarisa mufananidzo wakanaka nguva dzose asi kana uchida kuziva kana iwe aratidzwe yokumbokurukura, unofanira kuverenga his profile uye ona kana uine chete nezvido, zvinhu uye zvinotendwa.
Kamwe iwe wakatarisa kuburikidza vaviri Profiles uye pana mumwechete musikana ani uchifarira, inguva kunyora mashoko ako okutanga kwaari. Kazhinji ichi ndicho chikamu umo varume vakawanda kuti zvinenge imwe chikanganiso. Hazvinei kana uri pedyo musikana paIndaneti kana offline NO, kutanga kukurukurirana nenzira yakarurama Zvemazvirokwazvo zvinokosha.
Unganzwa kunyara chii ndinoenda kukubvunza ikozvino, asi kana imi muchida kuvandudza hwako kufambidzana upenyu, unofanira kupindura inotevera mubvunzo nokutendeka:
Wati yakanyorwa mashoko ari wokutanga musikana kuti iwe kumboshandisa kuonana mumwe musikana? Zvichida shoko renyu akatarisa seizvi:
Ndaiva Kutarira kwako Profile uye ndinofunga muri wakanaka.
Kana Kazhinji nyora mashoko seizvi, haufaniri kunetseka nei yako paIndaneti kufambidzana kuedza havasi kunyanya kubudirira. Muchavavarira haimbofadzi mukadzi nokunyorera naye shoko chete kuti vamwe vakomana gumi akatumira kwaari pamberi.
Kuti vachiwedzera paIndaneti kufambidzana kubudirira kwako unofanira kuisa pachako tisingabatanidzi nemhomho yevanhu vakanga nguva dzose shandisa chete mitsetse uye zvakafanana kwezvipimo mashoko. Kamwe chamakamisa pachako vega, hamuna makwikwi zvakare.
1. Personnalisez Mharidzo
Chikanganiso chokutanga kuti yakawanda varume kuita maererano paIndaneti kudanana kuti havasi kunyange kushandisa nguva kutsvaka zita rake chairo, kana kuti runenge personalize shoko naye zita remadunhurirwa rokuti. Vamwe vakadzi kuti vanozviti "sweet89" asi izvozvo hazvirevi kuti imi musingadi kuwana zita rake chairo kwake kufambidzana Profile.
Ndaona yakawanda paIndaneti kufambidzana Profiles yevakadzi akanyora pasi zita ravo chairo kumwe vari Profile, kunyange kana vaishandisa Kunyepa zita sezvo zita remadunhurirwa rokuti ravo. Nokuisa mukati achiedza kutsvaka zita rake chairo, Unoratidza kuti zvawaverenga his profile. A yakawanda vakadzi musatora izvi -zvinosanganisira uye kana uri mumwe vakomana vashoma chaizvo hanya kupfuura mufananidzo wake, ivo vakakundwa zvachose.
Kuwedzera kuti, isu vanhu vanoda kunzwa zita redu. Kunyange kana zviri chete mashoko ako okutanga, iye achava kunzwa kwakasimba nepedyo kana muchidana naye naye zita. Kana musingadi kuwana zita rake chairo, unofanira kanenge personalize shoko renyu naye zita remadunhurirwa rokuti, pane kushandisa Generic "Hey ".
2. The Individual kuzadzikisa
Ndechipi kurumbidza chakanakisisa unogona kupa mumwe mukadzi? Mumwe akavimbika uye kuti iye haana kunzwa miriyoni kare. Kunenge chaizvo kuti mukadzi wakanaka pamusoro paIndaneti kufambidzana paIndaneti awana zvizhinji zvibatsiro vakomana.
Mikana marefu kuti vose kumuudza sei akanaka uye akanaka ari. Kana muri mumwe mukomana uyo anonyora chaiwo chete mutsetse kuti okupedzisira vakomana gumi akanyora naye, iye pamwe haazorambi pindura. Ko kana iwe kumuudza kuti unofunga iye akanaka, nekuti meso mambishi kutarisa ushamwari uye kunyemwerera kwake akaita manyemwerera newewo?
Ndicho chinhu kuti vakomana gumi vakanyora naye pamberi haana kutaura. Kupa mumwe mukadzi mumwe kurumbidza anogara nani pane kutaura chete zvinhu kuti vamwe vakomana kare akamuudza. Zvinoratidza naye chaizvo nei iwe vanokwezvwa naye uye kwete vamwe mazana nevakadzi vane runako mifananidzo.
3. Nei Iye Special?
Zvakanaka, Ndinoziva kuti unoda kumunyorera nokuti vanokwezvwa naye, kana kuti mufananidzo iye anoratidza kwake Profile, asi ndezvipi zvimwe zvikonzero nei uchida kuziva kwaari? Sorry asi akanaka kunyemwerera uye refu blond bvudzi hazvifaniri chete zvikonzero nei uchida kuziva mukadzi ane paIndaneti kufambidzana paIndaneti.
Huchapa kunzwa chairo paunenge kushandura hwako kurumbidza kuva oga kurumbidza, asi iye Uchanzwa kunyange nani paunenge kumunyorera zvikonzero zvishoma nei iye anonakidzwa iwe, kuti hapana chokuita naye chitarisiko.
Kana iwe wedzera mumwe kana vaviri zvikonzero nei iwe unomuda, kuti zvine chokuita zvakananga unhu uye mabasa aunofarira kuti iye akanyorwa his profile, mikana yako kuwana mhinduro yakanaka achava mukuru chaizvo.
Vakadzi vanoda kunzwa anokwezva, asi naivowo vanoda kusangana vanhu vanofarira kupfuura zvavo chitarisiko. Nokuudza naye mashoko ako okutanga kuti uri kufarira Runako yake unhu, Munodzika pachako pasina zvose vakomana avo kumuudza sei akanaka ari, pasina kunyange achiona chokwadi kuti iye akanyora his profile zvakadini iye anoda kutarisira vamwe vanhu.
4. Sei Uri Perfect Vabatsirane?
Zvino iwe zvinenge zvose unofanira wokutanga mashoko akakwana. Pane imwe chete chirungiso kuti richiri chisipo. Iye anoziva kuti uchida Runako yake unhu, asi anoita iye Vanozivawo nei uchifarira unhu hwake?
Zviri runako pachena nei uchifarira kwaari nezviso asi hazvisi kuti pachena nei imi vanofarira unhu hwake. Unogona chokwadi nyora kuti ude chokwadi kuti iye ari zvakanaka vaifamba, asi sei iye kuva nechokwadi chokuti iwe usangobva ruomba kumutakura, pasina kunyange zvichireva naro.
Chokupedzisira Chaunofanira kuita kuti vapedze mashoko akakwana wokutanga kumuudza nei uchifarira ake zvinhu uye wake unhu. Kamwe iwe akamuudza kuti unokoshesa kwayo chevatariri, nokuti kare akafamba zvose pamusoro Asia uye vanoda kuenda South America gore rinouya, iye achava kuziva nei imi muri akakwana yokumbokurukura.